ज्लाटनले मिलान डर्बी गुमाउन सक्ने! | Hamro Khelkud
ज्लाटनले मिलान डर्बी गुमाउन सक्ने!
एजेन्सी – स्वीडिस भेट्रान फरवार्ड ज्लाटन इब्राहिमोभिचले इटालियन सिरी ‘ए’ को मिलान ‘डर्वी’ गुमाउने सम्भावना बढेको छ ।
३९ वर्षीय भेट्रान फरवार्डलाई पुनः कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि मिलान डर्वीको खेल गुमाउने सम्भावना बढेको हो । अब उनी कम्तीमा पनि १४ दिन सेल्फ आइसोलसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । मिलानले घरेलु मैदान सानसिरोमा १७ अक्टोबरमा इन्टर मिलानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
ज्लाटनलाई २४ सेप्टेम्बरमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि कोरोनामुक्त हुदै मिलानको प्रशिक्षण क्याम्पमा जोडिएका इब्राहिमोभिचलाई बिहीबार राति पुनः कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनीसँगै डिफेन्डर लियो डुआर्टेलाई पनि कोरोना पुष्टि भएको छ ।
कोरोना पुष्टि भएसँगै ज्लाटन घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा रहँदै प्रशिक्षणलाई जारी राखेका थिए । उनले मिलानको सुरुवाती चार बोडो ग्लिम्टि, क्रोटोन, रियो एभे र स्पेजियाविरुद्धको खेल गुमाइसकेका छन् । उनले सिरी ‘ए’ को पहिलो खेलमा बोलोग्नाविरुद्ध दुई गोल गरेका थिए ।
उत्कृष्ट सुरुवात गरेको मिलानले सिरी एको सुरुवाती तीन खेलमा जित हात पार्दै ९ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ । समान ९ अंक रहेपनि गोलअन्तरमा एटलान्टा अघि छ । यस्तै मिलानले युरोपा लिगको छनोटको दुई खेलमा सफल आत पार्दै युरोपा लिगमा समेत स्थान बनाउन सफल भएको छ ।
ज्लाटनले यसै समरमा एक वर्षको लागि सम्झौता नविकरण गरेका छन् । उनी गत जनवरीमा ६ महिनाको लागि अमेरिकी मेजर लिग सकर क्लब एलए ग्यालेक्सीबाट मिलान आएका थिए । तर, उनले मिलानमा लगातार उच्च प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
जनवरीयता इब्राहिमोभिचले मिलानका लागि २२ खेलमा १४ गोल गर्दा यो सिजन २ खेलमा ३ गोल गरिसकेका छन् ।